La tashiga - ITS Tech School
WAA IN AAD U BANNAAN
La taliyeyaasha amniga xirfadlayaasha waxay noqon kartaa xalka dhibaatada ah ee aan haysan aqoon iyo khibrad ku filan oo lagu xakamayn karo weerarrada cyber ee ugu dambeeyay, hanjabaadaha, iyo dayacanka. Waxaan awoodnaa in aan bixinno awoodo badan oo kala duwan - laga bilaabo tijaabinta gelitaanka nidaam u hoggaansanaanta iyo heerarka jaangooyooyinka, u nugulaanta.
Khubaradaadu waxay halkan u joogaan si ay u caawiyaan!
Waxaan la tashano
Fahmaan tiknoolajiyadda martigelinta, saameynta iyo isku xirnaanta habka cusub iyo software-ka. Waxaan fahamsanahay, qorsheyneynaa, abuuraynaa, isdhexgalinaynaa, hirgelineynaa oo aan qaadi karnaa
Hirgelinta, la-talinta, is-dhex-galka iyo dib-u-bixinta Aqoonta aad adigu u maamuli kartid nidaamyadaada adiga oo leh taageerada ugu yar ee laga helo dibadda.